Xasan Muudeey oo si adag uga jawaabay hadal kasoo yeeray Cali Maxamed Geedi – Banaadir weyne
Siyaasiga Xasan Cabduqaadir Muudeey ayaa si cara leh ugu jawaabay hadal ka soo yeeray Ex RW Cali Maxamed Geedi oo xalay munasabad ka sheegay in dadkii Mudullood ee shalay kulmay ay yihiin kuwa stress hayo.
Xasan Muudey ayaa bartiista facbooka sidan kusoo daabacay :-
Nin ku yimid jago uu lahaa halyeygii Maxamed Dheere (AU) ee siyaasaddiisu ka billaabatay maalintii uu jagada reysulwasaaranimo qabtay, aqoontiisuna aheyd daaweynta xoolaha, waan dareemi karaa in uu jahwareer ka qaadi karo jihada saxda ah ee siyaasadda ka jiri karto.
Waan u garaabayaa walaalkeey, waana dareemi karaa marka uu rabo in makarafoon cod dheer leh gacanta ku qabsado sida uu uga walwalo hadalkiisa inta uu u gooyn karo.
Waxaan aad ugu aqaan in uu yahay shakhsi aanan ka ganban wax kasta oo mudan in laga xishoodo iyo in laga fikiro xushmada ay mudan yihiin ehelkii shalay isagoo dabiiba xoolaha isugu daray jago reysulwasaranimo iyo in ay ku difaacaan xilka uu ku matalayay.
Stresska uu sheegay wuu jiraa, wuxuuna u badan yahay ruuxa ka hadla wax uusan aqoonteeda laheyn, marka waxaan leeyahay walaalkeey in ay kala duwan yihiin daawada xoolaha iyo midda dadka oo aysan isku midna noqon karin.
Waxaan ugu baaqayaa ninkasta ee raba in uu hadlo in uu isku dayo isu soo dhawaansho iyo midnimo ee aanan loo hadlin hababka macaashka loo raadiyo.